Imisebenzi - iMestech Industrial Limited
Njengebhizinisi lokukhiqiza elisebenza kahle, iMESTECH ayigcini ngokunikeza ngemikhiqizo, kepha futhi inikezela ngezixazululo nezinsizakalo zobuchwepheshe ezizungezile. Lezi zinsizakalo zifaka phakathi imikhiqizo yepulasitiki, ukwakheka kwemikhiqizo yehardware nokukhiqizwa, izingxenye zokubumba, ukucubungula ngemuva, ukuklanywa komkhiqizo nomhlangano, isimemezelo samasiko wokuthekelisa nezinye izici.
Ukwenza isikhunta nomjovo ukubumba
IMESTECH inohlelo oluphelele lokukhiqiza isikhunta sepulasitiki. Kwenziwa ngazimbili ezingaphezu kwezingama-300 zezikhunta zepulasitiki ngonyaka, kanti ukubunjwa komjovo nokucubungulwa kwemikhiqizo yepulasitiki kwenziwa ngemuva. Izinga lesikhunta yiHASCO, DEM, MISUMI neCHINA. Ngaphezu kokuhlangana namakhasimende kulesi sifunda, isikhunta sethu sibuye sithunyelwe eYurophu, eNyakatho Melika nase-Asia nakwamanye amazwe nezifunda.
Izinsimbi eziqinile zinephuzu lokuncibilika eliphakeme, ubulukhuni namandla, i-conductivity, i-ductility kanye ne-metallic luster kunezinye izinto. Ngokulungisa ukwakheka kwangaphakathi nokwakheka kwamangqamuzana ezinsimbi, singathola izakhiwo eziphakeme kakhulu kunalezo zepulasitiki nezinye izinto ezingezona ezensimbi
Ingxubevange yensimbi enhle kakhulu nezingxenye zokunemba okuphezulu kungatholakala. Ngakho-ke, izingxenye zensimbi zisetshenziswa kabanzi kwimishini nakwimishini, imboni yamakhemikhali, ezokundiza, i-aerospace, ukuzula, ezokuthutha, ukukhanyisa, ukwelashwa nezikagesi.
Izinsimbi ezisetshenziswa kakhulu yinsimbi, i-aluminium alloy, i-zinc alloy, ithusi, ingxubevange yethusi ne-titanium alloy. Izindlela zokucubungula zezingxenye ezenziwe ngazo zehlukile ngenxa yezakhiwo zazo ezihlukile, ukwakheka nokusetshenziswa kwazo. Ngaphezu kokuncibilikiswa kwensimbi, ubuchwepheshe obuphambili bokucubungula esibusebenzisayo ukuthola usayizi wokugcina nokwakheka kwezinsimbi yilezi: ukusakaza okokufa, ukukhishwa kwempuphu nemishini.
Ngokuthuthukiswa kobuchwepheshe be-Intanethi nokuvela kobuchwepheshe obusha bomkhiqizo, ukuvuselelwa kwemikhiqizo emisha emakethe yanamuhla kuyashesha futhi kuyashesha. Ungayivumela kanjani ukuthi imikhiqizo yakho ingene emakethe ngesikhathi esifushane kuyisihluthulelo sokuncintisana kwamabhizinisi. Izinkampani eziningi zivamise ukuphathisa izinsizakusebenza zangaphandle ukuqedela umsebenzi othile noma omningi womkhiqizo, ukuze zinciphise umjikelezo wokukhiqizwa komkhiqizo, futhi zigxile ekusebenzeni kwezimakethe nezinto eziyinhloko.
Onjiniyela beMestech banganikeza izingxenye zepulasitiki, izingxenye zezingxenyekazi zekhompiyutha nokwakheka komkhiqizo, ukuhlaziywa kokusebenza, kanye nokukhiqizwa kwesikhunta ekulandeleni, izingxenye zokukhiqiza kanye nezinsizakalo zomhlangano ophelile ngokuya ngezidingo zomkhiqizo wamakhasimende.
Umkhiqizo omusha kusukela ekuqaleni komklamo kuya ekukhiqizeni nasekukhangiseni, imvamisa udinga ukutshala imali eningi, amandla nesikhathi. Ikhwalithi yokuklanywa komkhiqizo inquma ngqo impumelelo yomkhiqizo. I-prototype iyindlela ebalulekile yokuhlola ukwakheka komkhiqizo. Isetshenziselwa ukuhlola izinkinga ezikhona ekwakhiweni komkhiqizo, ukuthuthukisa ukwakheka, nokugwema amaphutha amakhulu aholela ekulahlekelweni okukhulu esikhathini esizayo. Isibonelo, ezimotweni, ezindizeni, emikhunjini kanye nasemikhiqizweni kagesi nakugesi, ama-prototypes ahlala enziwa ukuqinisekisa ngaphambi kokukhiqizwa ngokusemthethweni kwesikhunta nezingxenye.
IMestech iyakwazi ukuhlinzeka amakhasimende nge-CNC, ukuphrinta kwe-3D kwezingxenye zepulasitiki nezingxenye zensimbi kanye nokukhiqizwa kwemodeli eyenziwe ngezandla ye-SLA, kanye nokukhiqizwa kwesampula elincane.
Kunezinkulungwane zemikhiqizo emakethe, evuselelwa njalo nsuku zonke. Umncintiswano emakethe uya ngokuya ushuba. Izinkampani ziyehluka ngosayizi. Izinkampani eziningi, ezikhawulelwe yizici zazo zebhizinisi, zigxila ekwakhiweni nasekuthuthukisweni kwemakethe noma imikhiqizo yobuchwepheshe obusha, futhi azisunguli izitshalo zazo zokuhlanganisa imikhiqizo.
Singanikeza ukuhlangana komkhiqizo nokusekelwa kobuchwepheshe kulawo makhasimende. Kubandakanya uchungechunge lwezinsizakalo zokuma okukodwa njengokuklanywa komkhiqizo, ukukhiqizwa kwezingxenye, ukuthengwa kwempahla nokuhlangana.
Ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme kanye nemikhiqizo yokubumba kwepulasitiki, izinsimbi zensimbi zokuphonsa izinsimbi kanye nemishini kungenye yezinjongo ezinkulu zikaMESTECH. Ngemishini nezinsiza zethu ezinhle kakhulu, sineqembu lonjiniyela abanolwazi nezinduku ezinamakhono. Siqinisekisa ikhwalithi yemikhiqizo yethu kanye nezinsizakalo ngokuthuthuka okuqhubekayo kobuchwepheshe obuphambili namasu, kanye nokuhlelwa okuqinile nokuphathwa.
Ukukhiqizwa komkhiqizo kuhlala kuqukethe uchungechunge lwamaketanga ahlobene. Ukuze kuhlangatshezwane nezidingo ezithuthukayo zamakhasimende, sinikezela ngezinsizakalo ze-turnkey kusuka ekwakhiweni kokuqala, ukuthuthukiswa, ukwenziwa komhlangano womkhiqizo. Ungathola okuningi mayelana nenye ngezansi noma ngenye indlela, xhumana nathi ukuxoxa ngezidingo zakho.